चुनावमा बालबालिका प्रयोग नगर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता सुदूरपश्चिमका राजनीतिक दलका नेताहरूले आगामी स्थानीय चुनावमा बालबालिका प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
भूमिहीनलाई जग्गा: थिचोमिचोको क्षतिपूर्ति भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जमीन वितरणको विषय ऐतिहासिक रूपमा उक्त वर्गमाथि भएको अन्याय र थिचोमिचोको क्षतिपूर्ति पनि हो।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिमबाट ६ जनाको उम्मेदवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विभिन्न दलका ६ जनाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
त्याे विजय, जसले जीवन बदल्याे ! राज्यले अवसर दिँदा सामान्य मानिसको जीवन कसरी फेरिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् कैलालीकी लक्ष्मी विक। निर्वाचन परिणाम आएपछि सुनेको ‘विजय’ शब्दले नै उनको मनोबल एकाएक उच्च बनायो।
बन्दाबन्दीः हुनेलाई बिदा, नहुनेलाई जेलभन्दा कठोर !
“यतिबेला म आफ्नो गाउँ जान सक्दिनँ” जमुना रोक्का भन्छिन्, “केही गरी म गाउँ पुगे नै भने पनि साहुकारहरु पैसा माग्न आइहाल्छन् ।”